ခင်မောင်စော (ဘာလင်) – ဖစ်မှဖစ်ရလေ (၂) | MoeMaKa Burmese News & Media
(မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၆
မြန်မာပြည်တွင်းမှရောပြည်ပမှပါ မြန်မာများ မြန်မာဘာသာစကား တလွဲ ပြောဆိုရေးသားမှုများ ကြာလေ ဆိုးလေ ဖြစ်လာသည်မှာများလှပါပြီ။ ကြာလျှင် မြန်မာစာနှင့် အသုံးပျက်ပါတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် သတိပေး ဆောင်းပါးကို မိုးမခ၌ပင် ‘ဖစ်မှဖစ်ရလေ’ ဟု အမည်တပ်ကာ ပထမပိုင်းကို ရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခုဒုတိယပိုင်း ကို ဆက်ရေးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါ၏။
ယခုခေတ်တွင် “အထပ်”ဆိုသောစကားပျောက်သွားပြီး “အလွှာ”ဟူသောစကားနှင့် အစားထိုးနေကြ သည်။ ကျွန်တော်က ၆လွှာမှာနေပါတယ်။ ကျွန်မက ၇ လွှာမှနေပါတယ်၊ စသောပြောသံများကို အမြဲ လိုလို ကြားနေရပါသည်။
အချို့လူများကယခုခေတ် ကန်ထရိုက်တိုက်များမှာ တထပ်နှင့်တထပ် ၊ အလွန်နိမ့်စွာ နီးကပ်စွာဆောက် ထားသဖြင့် အထပ်အဆင့် မရှိတော့ဘဲ အလွှာအဆင့်သာရှိတော့သဖြင့် အလွှာဟုခေါ်နေခြင်းပင်ဖြစ် သည် ဟုဆင်ခြေပေးပါသည်။ ယုတ္တိမရှိပါ။ ယခင်ရန်ကုန်မြို့ရှိတိုက်ခန်းများတွင် “ထပ်ခိုး”တင်လေ့ရှိပါ သည်။ ကွန်ထရိုက်တိုက်များက “အလွှာ”များမှာ ၎င်း “ထပ်ခိုး” များထက်မြင့်ပါသည်။ သို့သော် “ထပ်ခိုး” တင်လေ့ရှိသည့်ခေတ်က မြန်မာစာနှင့်အသုံးမပျက်သေး၍ မည်သူကမျှ “လွှာခိုး”ဟုမခေါ်ခဲ့ပါ။
အမှန်မှာ “အထပ်”နှင့်”အလွှာ”မတူပါ။ ကွဲကွဲပြားပြားခြားနားသော အဆင့်များ၊ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေ ရသောအဆင့်များကိုကို “အထပ်” ဟုသုံး၍ အလွန်ပါး လွှာသော အရာများတွင်သာ “အလွှာ” ဟုသုံးပါ သည်။ ဥပမာ။ မြန်မာလူမျိုးတို့ အလွန်ကြိုက်တတ်သော ဝက်သား ၃ ထပ်သား၊ “အသီးမှာ သရက်၊ အ ရွက်မှာ လက်ဖက်၊ အသားမှာဝက် ဆိုသည့် စကားရှိပါသည်။ “ဝက်သား ၃ ထပ်သား” ဟူသော အသုံး သာရှိပါ သည်။ မည်သူကမျှ “ဝက်သား ၃ လွှာသား” ဟုမခေါ်ပါ။ သစ်သား ၃ ထပ်သား၊ ၄ ထပ်သား လုပ်သည့် စက်ရုံကို လည်း၊ “အထပ်သားစက်ရုံ”ဟုသာခေါ်ပါသည်။ “အလွှာသား စက်ရုံ”ဟုမခေါ်ပါ။ “ဝက်သား ၃ ထပ်သား” ထက်ကြီးသော၊ မြင့်သော၊ အထပ်၊ အဆင့်များရှိသော တိုက်ခန်းများကို”အလွှာ” ဟုခေါ်နေ ခြင်းမှာ သဘာဝကျပါ၏လော။
ပွင့်ဖတ်လွှာဆိုသည်မှာ အလွန်ပါးလွှာသော အပွင့် အဖတ်များဖြစ်သည်။ အဝတ်များ၊ ပိတ်စများကို တ လွှာ ခြင်းလှန်သည်ဟုသုံးကြသည်။ ၇ လွှာချွတ်အကဆိုသည့် အဝတ်ကိုတလွှာခြင်း ၇ ကြိမ်ချွတ် ပြီး နောက်ဆုံး အရှက်လုံရုံအဝတ်သာကျန်သည့် အကတစ်မျိုးလည်း ပေါ်ခဲ့ဘူးပါသည်။ ပါးပါးလွှာလွှာ ကလေးဟူသော ဗမာစကားလည်း ရှိပါသည်။ “ဒီ မိန်း ကလေးနှယ် ဟီရိဩတပ္ပ မရှိလိုက်တာ၊ ဝတ်ထား လိုက်တဲ့ထဘီက ပါးပါးလွှာလွှာကလေး၊ နေရောင် အောက်မှာ သွားရပ်တော့ အကုန်မြင်နေရပြီ” ဟူသော ရှေးလူကြီးသူမများ၏ မြည်တွန်တောက်တီးသံကို မကြာခဏ ကြားခဲ့ရဘူးပါသည်။
မြန်မာရိုးရာအခေါ်ကမူ နှစ်ထပ်အိမ်၊ လေးထပ်တိုက်၊ ခြောက်ထပ်ရုံးကြီး စသော အခေါ်များသာရှိပါသည်။
“၃ ထပ်နှင့်လည်ပေါ်၊ ရွာတော်က ကျောင်း” ဆိုသည့်စာချိုးလည်းရှိပါသည်။ အထပ်ထက်ခန့် ငြားသော အဆင့်များကို မူ ဘုံဟုခေါ်ကြသည်။ ဘုံ ခုနှစ်ဆင့်စံ မင်းသမီး ဆိုသောအသုံးလည်း ရှိပါသည်။ နတ်ပြည် ခြောက်ထပ်၊ ဗြဟ္မာဘုံ ၂၀ ဆိုသော အခေါ်များလည်း ရှိပါသည်။ မည်သူကမျှ နတ်ပြည် ၆လွှာ၊ ဗြဟ္မာဘုံ အလွှာ ၂၀ ဟုခေါ်လျှင်လက်ခံကြမည် မဟုတ်ပါ။
အလွှာ၏အခြားအဓိပ္ပါယ်မှာ အဆင့်အတန်းကွဲပြားခြင်းကိုလည်းပြသည်။ ဥပမာ လူ့ အလွှာမျိုးစုံ၊ လူ့အလွှာအသီးသီး၊ ဥပမာ၊ အထက်တန်းလွှာမှလူများသည် များသောအားဖြင့် ဘဝင်မြင့်လေ့ ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
“၆ လွှာ မှာနေသည့်အမျိုးသမီး ထဘီက ပါးပါးလွှာလွှာကလေးဝတ်ထားပြီး ဝက်သား ၃ ထပ်သားကို လာဝယ်သည်” ဆိုသောဝါကျမျိုးတည်ဆောက်လာမည့်ခေတ်သို့ရောက်တော့မည်လော။ ရောက်လာ ခဲ့လျှင်တော့ သရုပ်ပျက်မြန်မာစကား၊ အရပ်ရပ်နေပြည်တော် ကြား၍မလျှော်သည့် မြန်မာ စကားဖြစ်လာ ပါလိမ့်မည်။ ထိုခေတ်မရောက်အောင်ဝိုင်းထိန်းပေးရမည့်တာဝန်မှာ မြန်မာစာနှင့်အသုံး မပျက်စေလိုသူ တိုင်း၌ရှိပါသည်။
(ခ) ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား တဲ့
ယခုအခါ မြန်မာစာနယ်ဇင်း အစောင်စောင်တွင် “ဘုန်းတော်ကြီး ဒလိုင်လားမား” ဟုဆိုသော အသုံးကို တွေ့ နေရပါသည်။ ယခင်ကမူ “တိဘက်ရဟန်းမင်းကြီး ဒလိုင်လားမား”ဟုသာသုံးရိုးထုံးစံ ရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာတို့ က ဘုရင်ဂျီ သာသနာပိုင် ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် တိဘက်ရဟန်းမင်းကြီး ဒလိုင်လားမား ၂ပါး ကိုသာ ရဟန်းမင်းကြီးဟု သုံးကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီး၌ ကာဒီနယ်ခေါ် ရဟန်း အမတ်ကြီးများလည်း ရှိကာ အစိုးရတခုသဖွယ် အုပ်ချုပ်ရေးမျိုး ရှိသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒလိုင် လားမား ၌လည်း အတိုင်ပင်ခံ ရဟန်းအမတ်ကြီးများဖြစ်သော ပန်ချန် လားမား၊ တာရှီလားမား၊ စသော ရဟန်းအမတ်ကြီးများရှိသည်။ ထိုကြောင့် ၎င်းတို့ ကို ရဟန်းမင်းကြီးများဟုခေါ်ခဲ့ ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုန်းတော်ကြီးဆိုသောစကားကို မြန်မာအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်၌ ” A monk of many years standing” ဟု အဓိပ္ပါယ်ပေးထားသဖြင့် မြန်မာစကား၌ “ဝါတော်ကြီးသော ရဟန်း” ဟုသာ အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ဒလိုင် လားမား၏ ရာထူးနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိပါ။ ပုတ်ရဟန်းမင်းကြီးအောက်တွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီး၊ (Archbishop ) ဂိုဏ်းအုပ် ဘုန်းတော်ကြီး (Bishop) များရှိသကဲ့သို့ဒလိုင်လားမား၏အောက်တွင်လည်း လားမား အဆင့်ဆင့်ရှိပါသည်။
၁၉၅၉ ခုနှစ် တိဘက်ပြည်ကို တရုတ်ဝင်သိမ်းသဖြင့် တိဘက် ရဟန်းမင်းကြီး ဒလိုင်လားမား အိန္ဒိယကို ထွက်ပြေးရရစဉ်ကမူ မြန်မာသတင်းစာများက သူ့အား “ခေတ်သစ်တရုတ်ပြေးမင်း” ဟု ရေးကြသည်။ နိုင်ငံတခုကိုအုပ်စိုးသောမင်းအဖြစ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာစကားတွင် ဦးနုအစိုးရခေတ်ကရော ဗိုလ်နေ ဝင်းခေတ်အထိပါ “ရဟန်းမင်းကြီး” ဟု သုံးခဲ့ပါ လျှက်၁၉၈၈ ခု နောက်ပိုင်းတွင်မှ”ဘုန်းတော်ကြီး” ဟု ပြောင်း၍ သုံးသည်မှာ အကြောင်းရှိရပေလိမ့်မည်။ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း မြန်မာအစိုးရများသည် ဘာသာ တရားကို အလွန်လိုက်စားကြပြီး အတိုင်းထက်အလွန် “တရားအားထုတ်” နေကြသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။
ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့လျှင် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ကောင်းစွာ သဘောပေါက်သဖြင့် မဟာယာန “လာ မား” ဂိုဏ်းသားတို့အယူရှိသလို ဒလိုင်လားမားသည် “ဗောဓိသတ္တ” ဘုရားအလောင်းဝင်စားသူ ဆိုသည့် အချက်ကို လက်မခံနိုင်၍ပင်လော။ သို့သော် ထိုအချက်ကလည်း “မင်းကြီး” ဟူသောအသုံးနှင့် မဆိုင် ပါပေ။
(ဂ) Queen ဆိုတိုင်း ဘုရင်မ မဟုတ်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စကားတွင် ဘုရင်မကိုရော ဘုရင်ကတော်မိဖုယားကိုပါ queenဟုခေါ်သည်။ သို့ ရာတွင် အင်္ဂလိပ်စကား၌လည်း အတိအကျပြောရလျှင် ( queen regnal ) ခေါ်တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ် သူ နိုင်ငံ့ဥသျှောင် ဘုရင်မနှင့် queen marital ခေါ် မိမိယောင်္ကျားကြောင့် ဘုရင်ကတော် မိဖုယား ဖြစ်လာရသူဟူ၍ရှိကြပါသည်။ ယခုလက်ရှိ အင်္ဂလိပ်ဘုရင်မကြီး အဲလစ်စဘက်မှာ queen regnal ဖြစ် ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Queen Elilezabeth of Britain ကို မြန်မာလို ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီး အက်လိဇဘက် ဟု ဘာသာပြန်ရပါမည်။ Queen Maxima of the Netherlands မှာတော့ ယခင်က သာမန်အရပ်သူ သာ ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန် အိမ်ရှေ့ မင်းသားနှင့်ရ၍ အိမ်ရှေ့ မိဖုယားဖြစ်လာရာမှ သူ့ ခင်ပွန်းသည် ဘုရင်ဖြစ်သောအချိန်တွင် မိဖုယား သို့ မဟုတ် ဘုရင်ကတော် ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူကိုယ်တိုင် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သည့်ဘုရင်မ မဟုတ်ပါ။ ထို့ ကြောင့် Queen Maxima of the Netherlands ကို မြန်မာလို နယ်သာလန်မိဖုယား မက်ဆီမာ ဟု ဘာသာပြန်ရပါမည်။
ထို့ ကြောင့် အင်္ဂလိပ်စကား queen ကို တွေ့ တိုင်း၊ မြန်မာလို ဘုရင်မ ဟု ဘာသာမပြန်သင့်ပါ။ ကိုယ် တိုင် အုပ်ချုပ်သူကိုသာဘုရင်မဟု ဘာသာပြန်ပြီး ဘုရင်ကတော်များကို မိဖုရားဟု ဘာသာပြန်ရမည်ကို ကြပ်ကြပ်သတိထားကြပါ။ အက်လိဇဘက်ဘုရင်မကြီး၏ ခင်ပွန်းသည်မှာ အီဒင်ဘာရာ မြို့ စားကြီး ဖြစ် သည်။ ၎င်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်လည်း king ဟုမသုံး၊ မြန်မာဘာသာတွင်လည်း ဘုရင်ဟုမခေါ်ဘဲ ဘုရင်မ ကြင်ယာတော်ဟုသာသုံးသည်။ အထူးသတိပြုရမည်မှာ ဘုရင်ကတော် (မိဖုယား) ကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာ ၌ queen ဟုခေါ်သော်လည်း ဘုရင်မလင်ကို king ဟု မခေါ်ပါ။ မြန်မာစကားတွင်လည်း “ဘုရင် နှင့်ညားတော့မိဖုယား” ဆိုသောစကားရှိပါသည်။
ကျေးတောသူ မနု သည် စစ်ကိုင်းမင်း ခေါ် ဖလ်နန်းရှင် ခေါ် ဘကြီးတော်ဘုရား၏ မိဖုယားခေါင်ကြီးဖြစ်ပြီး နန်းမတော်မယ်နုဟု ကျော်ကြားသွားခဲ့သည်။ မြန်မာ့ သမိုင်းတလျောက်လုံးတွင် ဘုရင်မ အစစ်ဖြစ်ခဲ့သူမှာ မွန်ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုနှင့် သမိုင်းဒဏ္ဍာရီ legendသဖွယ်ဖြစ်နေသော ပန်ထွာဘုရင်မ ၂ဦးသာ ရှိခဲ့ ပါသည်။ ကျန်သော Queen အားလုံးမှာ မိဖုယား (ဘုရင် ကတော်) များသာဖြစ်ပါသည်။
( ဃ) ကျောင်းသမီး တဲ့
တလောက မြန်မာပြည်တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဆန္ဒပြသောသတင်းကို စာစောင်တခု၌ ကျောင်းသား ကျောင်းသမီး များဆန္ဒပြနေသည် ဟုရေးသွားသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ပုလ္လိင် အတွက် သားကိုသုံးတိုင်း၊ ဣထ္ထိလိင်အတွက်သမီးဟု မသုံးရပါ။ ရင်ဝယ်ဖြစ်သော သား၊ ရင်ဝယ်ဖြစ်သောသမီးတို့အဖြစ်သုံးပါက သားနှင့်သမီးကို သုံးနိုင်သည်။ ဥပမာ။ မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ တို့ မှာ ဘုရင်၏သားသမီးများ ဖြစ်ကြောင်းပြသည်။ သူဌေးသား သူဌေးသမီးတို့ မှာ သူဌေး၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြောင်းပြသည်။ ဇာတ် ကပြရာတွင် ဇာတ်သူ ဇာတ်သားများသည် ဘုရင့်သားတော်အဖြစ်၎င်း၊ သမီးတော်အဖြစ်၎င်း သရုပ် ဆောင်ရသဖြင့် ဇာတ်မင်းသား၊ ဇာတ်မင်းသမီး ဟူသော အခေါ်များပေါ်လာသည်။ ခေတ်နှင့်လိုက်၍ ပြဇာတ်၊ ရုပ်ရှင်၊ စသည်တို့ ပေါ်လာသောအခါတွင် ပြဇာတ်မင်းသား ၊ ပြဇာတ်မင်းသမီး၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဟုသောအခေါ်များပေါ်လာသည်။
နတ်သားနှင့်နတ်သမီးမှာ ဒေဝပုတ္တ နှင့်ဒေဝီပုတ္တရီ စသော ပါဠိစကားမှတိုက်ရိုက်မြန်မာပြန်ထားခြင်းဖြစ် သည်။ “ဘောဒေဝပုတ္တ အိုနတ်သား” ဆိုသောစာကြောင်းကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်ဘူးသူတိုင်း သိကြပါ လိမ့်မည်။
အဖွဲ့ အစည်း အသင်းအပင်းဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် ပုလ္လိင် အတွက် “သား” ကို သုံးပြီး ဣထ္ထိလိင်အတွက် “သူ” ကို သုံးသည်။ ဥပမာများမှာ။ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ။ မြို့ သား မြို့ သူ။ ပြည်သူ ပြည်သား။ အသင်းသူ အသင်းသား။ အကျဉ်းသူ အကျဉ်းသား။
အမှန်မှာ “စစ်သား” တွင်သုံးသော သားသည် မင်းသား၊ နတ်သားတို့ တွင်သုံးသော”သား” ကဲ့သို့ ရင်ဝယ် ဖြစ်သော သားမဟုတ် ၊ အဖွဲ့ အစည်းတခုခု၏ အဖွဲ့ ဝင်ပုလ္လိင်သာဖြစ်သည်။ ရှေးအခါက စစ်သား၊ စစ်သူ ဟူသော အခေါ်သာရှိခဲ့သည်။ စစ်သူ မြလေး ဆိုသော စာရေးဆရာတဦးပင်ရှိခဲ့ဘူးသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ်က အမျိုးသမီး စစ်သည်များစုဆောင်းပြီးတပ်ဖွဲ့ ရာတွင် “စစ်သမီး” ဟုသော မှား ယွင်း သော အသုံးအနှုံးပေါ်လာသည်။ အမှန်မှာ “စစ်သူ” သို့ မဟုတ် “စစ်သည်မ” သို့ မဟုတ် “အမျိုးသ မီး စစ်သည်” ဟုသာခေါ်သင့်သည်။
အခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တခုဖြစ်သော၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ တွင်မူ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းက ပုလိပ်သား၊ ပုလိပ်မ ဟုသာခေါ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းရဲ ဟုပြောင်းသောအချိန်၌ပင် ရဲသား ၊ ရဲမေ ဟုသာခေါ်သည်။ “ရဲသမီး” ဟု မည်သုကမျှ မခေါ်။ ဤ အချက်က” စစ်သမီး” ဟူသော အခေါ်သည် သဒ္ဒါ မှားနေကြောင်း ပြနေသည်။ စစ်သမီး အစား၊ စစ်သူ၊ တပ်သူ၊ စစ်သည်မ၊ စသဖြင့်သုံးလျှင် စစ်သား၊ တပ်သား၊ စစ်သည်၊ တို့ ၏ ဣထ္ထိလိင်အတွက်စကားလုံးဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပါသည်။
မြို့ သူ၊ ကျောင်းသူ၊ အရပ်သူစသော စကားလုံးများကို ကြည့် ခြင်းဖြင့်၊ မြန်မာစကားတွင် “သူ”သည် ဣထ္ထိလိင်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြသည်။ ထို့ ကြောင့် မြန်မာသဒ္ဒါ၌မရှိသော၊ “သူမ” ဆိုသည့် စကားကို ထွင် ရန်မလိုပါ။
(င) နန်းကျမြ်ို့ တော်တဲ့ 
ယခုအခါ အချို့ စာနယ်ဇင်းများတွင် ရန်ကုန်မြို့ ကို နန်းကျမြို့ တော်ဟု ရေးနေကြပါသည်။ ၎င်း အသုံးအနှုန်းမှာ မမှန်ပါ။ မြို့ တော်သည် နန်းမကျနိုင်ပါ။ ဘုရင် မိဘုရား အိမ်ရှေ့ မင်းစသောမင်းစိုးရာဇာများသာ နန်းကျနိုင်ပါသည်။ နန်းကျဘုရင်၊ နန်းကျမိဘုရား၊ စသောအသုံးများမှာ မှန်ကန်သော်လည်း နန်းကျမြို့ တော်ဆိုသောစကားမှာမူ မှန်ကန်ခြင်းမရှိပါ။ မြို့ တော်ဟောင်းဟုသာသုံးရပါမည်။အင်္ဂလိပ် ခေတ်က ရန်ကုန်ကို မြို့ တော်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သောအခါ မန္တလေးမှာ မြို့ တော်ဟောင်း ဖြစ်သွား သည်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ရတနာပုံ နေပြည်တော်ဟု ခေါ်သော မန္တလေးမြို့ ကို တည်သောအခါ အမရ ပူရမှာ မြို့ တော်ဟောင်းဖြစ်သွားသည်။ ရတနာပူရခေါ် အင်းဝမှာလည်း မြို့ တော်ဟောင်းဖြစ်သည်။ ထို နည်းတူစွာ ရွှေဘို၊ စစ်ကိုင်း၊ ပင်းယ၊ ပုဂံ၊ သရေခေတ္တရာ၊ တို့ မှာလည်း မြို့ တော်ဟောင်းများသာ ဖြစ် ကြပါသည်။ မည်သည့် မြို့ ကမှနန်းကျမြို့ တော်မဟုတ်ပါ။
(စ) လိပ်ဆွဲတံခါးတဲ့ 
၎င်းအသစ်ထွင်ထားသောဝေါဟာရကို စာဖတ်သူများကြားဘူးကြပါရဲ့ လား၊ စာရေးသူ၏အထင်တွင်မူ ရန်ကုန်အိမ်များ အောက်ထပ်တွင် တပ်ထားတတ်သော ဘီးဖြင့်လှိမ့် ၍ ဆွဲဖွင့် ဆွဲပိတ်လုပ်ရသော တံခါးမျိုး၊ “ဘိလပ်တံခါး”ဟုခေါ်သည့်တံခါးမျိုး ၊”ဘာဂျာတံခါး”ဟုခေါ်သည့် တံခါးမျိုး ဖြစ်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ နောက်တံခါးတမျိုးမှာသစ်သားတံခါး တဖက် ၄ ၊ ၅ ချပ် စီကို တချပ်နှင့် တချပ်ကြား၌ ပတ္တာဖြင့် ဆက် ထား၍ တဖက်တခြမ်းစီတွင် ခေါက်ထားသော တံခါးရှည်ကြီးများလည်း ရှိသည်။ ၎င်းတံခါးမျိုးကို “ခေါက် တံခါး”ဟုခေါ်ပါသည်။
လိပ်ဆွဲတံခါးဆိုသည်မှာတော့ မြန်မာ့ဝေါဟာရတွင်မရှိသေးပါ။ နွားဆွဲသောလှည်းကို နွားလှည်း ဟုခေါ် သည်။ မြင်းဆွဲသော ရထားကို မြင်းရထားဟု ခေါ်သည်။ ယခုလိပ်ဆွဲတံခါးဟု ဆိုပါလျှင် လိပ်သတ္တဝါ ဖြင့်ဆွဲပိတ်ရသော တံခါးဖြစ်သွားပါလိမ့် မည်။
ကြည့် လည်း လုပ်ကြပါဦး ဝေါဟာရ အသစ်ထွင်ဆရာတို့ ခင်ဗျား။
(ဆ) မျင့် တဲ့ 
ကဝိလက္ခဏာသတ်ပုံကျမ်းအလိုအရ၎င်း၊ ကဝိမျက်မှန်သတ်ပုံကျမ်းအရ၎င်း၊ ရစ်ပင့်ဋီကာ၌၎င်း၊ ကုန် ကုန်ပြောရလျှင်ဗိုလ်နေဝင်းထွင်သွားသော သတ်ပုံကျမ်းတွင်၎င်း၊ မျင့် ဆိုသော စာလုံးပေါင်းမရှိပါ။ယခုခေတ်တွင် “သူများထက်ထူး နဖူး ချိုပေါက်လိုသူတချို့ ” က အသံထွက် ဖတ်လို့ ရပြီးရော၊ ဆိုသည့် သဘောဖြင့်၊ အေးမျင့်၊ အောင်မျင့် ၊ လှမျင့်၊ စသဖြင့် ရေးနေကြသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ သြောင်မျင့်၊ ဠှမျင့်ဟုမရေးကြသေးသည်မှာ ကံကောင်းနေသေးသည်ဟုပင်ထင်ရပါသည်။ ထီထိုးရာတွင် “ဘိုးဘိုး အောင် မ ပါ” ဟူသောအတိတ်ကို “ဗိုးဗိုးသြောင် မ ဗာ” ဟူ၍များ ရေးကြတော့မည်လားမသိပါ။
ဤနေရာတွင်ဆက်စပ်၍ စာရေးသူ ကိုယ်တွေ့ကြုံရပုံ တခုကို ပြောပြလိုပါသည်။ လွန်ခဲ့ သောအနှစ် ၅၀ ခန့် က စာရေးသုတို့ နိုင်ငံခြားသို့ ပညာတော်သင်အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်းခံရရာတွင် သူငယ်ချင်း တယောက် ၏အမည်၌ “သိန်း” ပါသည်။ သို့ သော် ထိုပုဂ္ဂိုလ်က ၎င်း၏အမည်ကို “သိမ်း” ဟု ရေးသည်။ မြန်မာလို ချည်း ဆိုပါက တော်ပါသေးသည်။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးရာတွင်ပင် Theinဟု မရေးဘဲ Thame ဟုရေးသည်။ ၎င်းက “လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ “သိမ်း မြစ်” Thames စာလုံးပေါင်းအတိုင်းပေါင်းထားတာ” ဟု ဝင့်ကြွားစွာ ဆို သည်။
စာရေးသူက “လန်ဒန်က Thames မြစ်က “သိမ်း” လို့ အသံမထွက်ဘူးဟေ့ ။ Thamz “ထဲမ်ဇ်”လို့အသံထွက်တာ။ “သိမ်းမြစ်” ဆိုတာဗမာတောသားတွေရဲ့အသံထွက်ကွ။” ဟု ပြောသော်လည်း နားမဝင် ပါ။ ဂျာမနီသို့ ရောက်သောအခါ ဂျာမန်တို့ က ၎င်း၏အမည်ကို စာလုံးပေါင်း Thame အတိုင်း “သာမိ” ဟုခေါ် ကြလေတော့သည်။ ထို့ ကြောင့် ထိုသူမှာ သူငယ်ချင်းအသိုင်းအဝိုင်းထဲတွင် “ဘုန်းကြီးလူထွက်” ဟု၎င်း “သာမိ” ဟု၎င်း သေသည်ထိ နံမည်တွင်သွားခဲ့ ရရှာသည်။ (သာမိ ဆိုသည်မှာ ဘုန်းကြီးဘွဲ့ များတွင် ပါ လေ့ရှိသော အမည်ဖြစ်သည်၊ ဥပမာ ဦးပညာသာမိ။ ဦးကုသလသာမိ )။ ၎င်းကွယ်လွန်ကြောင်း သူငယ် ချင်းတယောက်က ဖုန်းဖြင့် အကြောင်း ကြားရာ၌ သူ့နာမည်ရင်းကိုမပြောတော့ဘဲ “သာမိ တယောက် တော့ဆုံးသွားရှာပြီ” ဟုသာပြောလေတော့သည်။
(ဇ) ခလေး တဲ့
မြန်မာစကားတွင် ရေးတော့အမှန်ဖတ်တော့အသံ ဟူသော ဆိုရိုးရှိပါသည်။ ဥပမာ “ကလေး” ဟု က ကြီး ဖြင့်ရေးသော်လည်း၊ “ခလေး” ဟု ခ ကွေး အသံထွက်ရပါသည်။ ယခုခေတ် မြန်မာစာနယ်ဇင်းများတွင်မူ ရေးတော့လည်း အသံ၊ ဖတ်တော့လည်းအသံလုပ်နေကြပြီး သတ်ပုံ သတ်ညွန်းများမှားယွင်းနေကြောင်း မကြာခဏတွေ့ မြင်ရပါသည်။ ကကြီးဖြင့် ကလေးဟုမရေးတော့ဘဲ ခကွေးဖြင့် ခလေးဟု ရေးနေကြပါသည်။ ကြာလျှင် သတ်ပုံပျက်ပါတော့မည်။ လွန်ခဲ့ သော အနှစ်၆၀ ခန့်စာရေးသူတို့ ကလေးဘဝက “ခလေး ဂျာနယ်”ဟူသော ကလေးစာစောင်တခုပေါ်ခဲ့ ဘူးပါသည်။ ဦးစီးထုတ်ဝေသူမှာ ကွယ်လွန်သူ စာရေး ဆရာကြီး ဇဝန ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဇဝနအား သတ်ပုံသတ်ညွန်းအတိုင်း “ကလေး” ဟု မရေးသဖြင့် ဝေဖန် ချက်များပေါ်ခဲ့ ဘူးပါသည်။ ဆရာ ဇဝနကတော့ ကျောင်းနေစ စာတတ်ခါစ ကလေးများ အသံထွက် အတိုင်း ဖတ်နိုင်ရန် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတ်ပုံ မှန်မမှန်ကိုတော့ သူငယ်တန်းမှစ၍ မြန်မာစာ သင်ကြားရသည့် ကလေးများအလိုလို သိရှိနိုင်စေရန် ကွဲပြားခြားနားစွာ ရေးပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတ်ပုံ မမှန်ကြောင်းကိုတော့ ကျောင်းမှသင်ကြားသည့် ဆရာများကသူငယ်တန်းမှစ၍ သင်ကြားပေးကြပါ လိမ့် မည်ဟု ရှင်းပြပါသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါ နှင့် လိုက်လျောညီထွေသော ရှင်းပြချက်ဖြစ်၍ အားလုံးက လက်ခံကြပါသည်။ ထိုခေတ်ထိုအခါကလည်း တကယ်တတ်သောဆရာများက သိလိုတတ်လိုသူတပည့့် များအားသင်ကြားပေးသောခေတ်ဖြစ်သဖြင့် ကာလံဒေသံ နှင့်ကိုက်ညီပါသည်။
ဆရာဇဝန ထောက်ပြ သွားသောနောက်ဥပမာတခုမှာ ကားလမ်းများပေါ်တွင်ထားသော ဆိုင်းဘုတ်၌ သတ်ပုံအမှန်အတိုင်း “ဖြည်းဖြည်းမောင်း၊ ကျောင်းရှိသည်” အစား ” ဖြေးဖြေးမောင်း၊ ကျောင်းရှိသည်” ဟု ရေးပြထားရခြင်း မှာ စာကောင်းကောင်း မတတ်သော ကားမောင်းသမားများ အလွယ်တကုနားလည်စေရန် သတ်ပုံ မမှန် သော်လည်း ရေးပြထားရကြောင်း၊ အကယ်၍ “ဖြည်းဖြည်း”ဆိုသည်ကို စာကောင်းကောင်းမ တတ်သော ကားမောင်းသမားက ဘာပါလိမ့်ဟုစဉ်းစားနေခိုက် ကားအရှိန်မသတ်နိုင်သဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသား ကလေးငယ်များကို ဝင်တိုက်နိုင်ကြောင်းထောက်ပြပါသည်။ ၎င်းဆင်ခြေမှာလည်း ယုတ္တိရှိသောကြောင့် လက်ခံကြပါသည်။
ယခုမှာမူ မြန်မာစာနယ်ဇင်း အားလုံးလောက်က သတ်ပုံ အမှားဖြင့် “ခလေး” ဟုရေးနေကြသည်ကို တွေ့နေရ၍ မြန်မာစာမပျက်စေရန် သတိပေးဆောင်းပါးရေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(ဈ) လျှပ်စစ်ရထားလား၊ ဓါတ်ရထားလား။
ရန်ကုန်မြို့ တွင် လျှပ်စစ်ရထားပြေးဆွဲတော့မည်ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်လိုက်ရသည်။ ဓါတ်ပုံကို ကြည့် လိုက်သောအခါတွင် မော်တော်ကားလမ်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်၍ သို့ မဟုတ် မော်တော်ကားလမ်းပေါ်တွင် သံ လမ်းထည့် တပ်ထားပြီးမောင်းနေသော ရထားတွဲ သုံးတွဲလောက်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ၎င်းရထားမျိုးကို အင်္ဂလိပ်တို့ က Tram (သို့ မဟုတ်) Tramcar ဟုခေါ်ကာ အမေရိကန်တို့ က Streetcar ဟုခေါ်ပြီး ဂျာ မန်တို့ က Strassenbahn ဟုခေါ်သည်။ “A streetcar name Desire” ဆိုသောအမေရိကန် ရုပ်ရှင်ကား သည် ၆၀ ခုနှစ်များက အကယ်ဒမီဆုရသွားခဲ့ ဘူးပါသည်။ ၎င်း ရထားမျိုး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီ က ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့ များတွင် ရှိခဲ့ ဘူးသည်။ မြန်မာလို “ဓါတ်ရထား”ဟုခေါ်ပါသည်။ စာရေးသူတို့ ငယ် စဉ်ကသင်ခဲ့ ရသော ဒေါင်းတံဆိပ်မြန်မာဖတ်စာ စာအုပ်တွင်လည်း ဓါတ်ရထားအကြောင်းပါပါသည်။
လျှပ်စစ်ရထားဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစက်ခေါင်းကို အသုံးပြု၍ ရထားတွဲ ၁၀တွဲလောက်ကို ဆွဲပြီး ရထားလမ်းပေါ်တွင်ပြေးသောမီးရထားများဖြစ်ပါသည်။ အချို့ လျှပ်စစ်ရထားများမှာ တနာရီ မိုင် ၂၀၀ ခန့့် မြန်အောင် မောင်းနိုင်သဖြင့် ၎င်းတို့ ကို ကျည်ဆံရထား (Bullet train )ဟုခေါ်ကြသည်။ ဂျပန် ရှိ “ရှင်းကန်းဆင်” ဟုခေါ်သော ရထားနှင့် ဂျာမနီ ရှိ ICE (Inter City Express) တို့ မှာ အမြန်ပြေးလျှပ် စစ် ရထားများဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် လျှပ်စစ်ရထားနှင့် ဓါတ်ရထားမတူပါ။ လျှပ်စစ်ရထားက မီးရထား လမ်းပေါ်တွင်ပြေး၍ မီးရထားဘူတာရုံ များတွင် ရပ်သည်။ မော်တော်ကားထက်မြန်သည်။ ဓါတ်ရထားက မော်တော်ကားလမ်းပေါ်တွင် သံလမ်းနှင့်ပြေးသည်။ အများဆုံး ၃ တွဲ ခန့် သာပါပြီး ကား၏ အမြန်နှုံး လောက်ပင် ရှိသည်။ အချို့ မှာ ကားထက်နှေးသည်။ ထိုကြောင့် ယခု ရန်ကုန်ကမ်းနားလမ်းတွင် အစမ်း ပြေး ဆွဲနေသောရထားများမှာ Tram ခေါ် ဓါတ်ရထားများသာဖြစ်ပါကြောင်း။
(ည) အမျိုးသမီးများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်သူအမျိုးသမီးတဲ့ ။
အထက်ပါခေါင်းစဉ်ကို တွေ့ လိုက်ရသဖြင့် စာရေးသူမှာ ဘာကို ဆိုလိုထားမှန်းမသိ၍ ၍ အောက်မှ သတင်းကို ဖတ်ကြည့် ရာတွင် ကျေးလက်ဒေသများမှ မသိနားမလည်သူ မိန်းမရွယ်များကို မြို့ ကြီးများ သို့ ဖျားယောင်းခေါ်ယူလာပြီး ပြည့် တန်ဆာလုပ်ခိုင်းနေသောမိန်းမကြီး တယောက်အကြောင်း ဖြစ်နေ ပါသည်။ ထိုကဲ့ သို့ လုပ်သူများကို မြန်မာဘာသာစကား၌ ဖာခေါင်းဟူ၍ ၎င်း၊ ဇိမ်ခေါင်းဟု၍၎င်း၊ ပြည့့် တန်ဆာခေါင်းဟု၍၎င်း၊ နတ်ထိန်းဟူ၍၎င်း ခေါ်ကြပါသည်။ ဥပမာ ဇိမ်ခေါင်းသည် ယောကျာင်္းဖြစ်လျှင် ဖာခေါင်းဟုခေါ်၍ မိန်းမဖြစ်လျှင် ဖာခေါင်းမ ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းအသုံးအနှုန်းမှာကြမ်းသည်ဟုထင်လျှင် ဇိမ်ခေါင်း၊ ဇိမ်ခေါင်းမ ဟုသုံးကြသည်။ တချို့ ကလည်း ဇိမ်ခေါင်းမကို ဘန်းစကားနှင့် “မာမီကြီး” ဟုခေါ် ကြပါသည်။
ဝေါဟာရအသစ်ထွင် ဆရာတို့ ၏လက်ချက်မှာ မြန်မာတို့ပင်နားမလည်နိုင်သောဝေါဟာရအသစ် များပေါ် လာခြင်းပင်။
(ဋ) ဘုန်းကြီးဟောင်းတဲ့ ။
မြန်မာစကားတွင် ဘုန်းကြီးလူထွက်ဟူသောအသုံးအနှုံးသာရှိပါသည်။ ဘုန်းကြီးဟောင်းသော အသုံး အ နှုန်းမရှိပါ။ ဘုန်းကြီးလူထွက်များက သူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့ “လူပြန်တော်”ဟုသမုတ်ကြပါ၏။ ဘုန်းကြီး လူထွက်များကို နောက်ပြီး စာချိုးထားသော “အုန်းသီး တူနှက်တော့ အဆန်ချောင်သည်။ ဘုန်းကြီး လူထွက်တော့ ဥာဏ်ချောင်သည်။” ဆိုသော စကားပုံယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင်ကိုတော့ကြား ဘူးပါသည်။။ စာရေးသူသည် အသက်၇၀ထဲရောက်နေပါပြီ။ ဘုန်းကြီးလူထွက်ဆိုသောစကားလုံး၊ “လူပြန်တော်” ဟူသောဝေါဟာရတို့ ကိုသာကြား ဘူးပါသည်။ ဘုန်းကြီးဟောင်းဆိုသည်ကိုတော့ တခါမှ လည်းမကြားဘူး၊ မဖတ်ဘူးပါခင်ဗျာ။ အင်္ဂလိပ်စကား Ex-priest , Former Priest တို့ ကို မြန်မာလို သောက်ရမ်းဘာသာပြန်လိုက်ဟန်တူပါသည်။
(ဌ) ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ၊ ညီအစ်မ၊ အခေါ်အဝေါ်များ။
မြန်မာဘာသာစကားအစစ်တွင် ရှိသောညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ၊ ညီအစ်မဆိုသောအသုံးကို ကြည့် ခြင်း အားဖြင့် ညီနှင့် အစ်ကိုသည် ယောကျင်္ားများအတွက်သာသုံးသော နာမ်များဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ “သူက ကျွန်တော့်အစ်ကိုပါ။ ဒီကောင်လေးက ကျွန်တော့် ညီပါ” ဆိုသောအသုံးများမှာ သဒ္ဒါမှန်သည်။ မောင် နှမဟူသော စကားကို ထောက်၍ ၎င်းစကားလုံးသည် ဆန့် ကျင်ဘက်လိင်များ၌ သုံးသောစကား ဖြစ် သည်။ ယခုခေတ်လူအများစုပြောနေကြသော “သူက ကျွန်တော့် ညီမပါ။ သူက ကျွန်မ အစ်ကိုပါ ” ဆို သောအသုံးများသည် အမှားများဖြစ်သည်။ ယောကျင်္ားတယောက်သည် မိမိအောက်ငယ်သော မိန်းက လေးကို အမျိုးတော်ကြောင်းပြလို လျှင် “သူက ကျွန်တော့် နှမလေးပါ” ဟု ပြောမှ သဒ္ဒါမှန်သည်။ “ဒီမိန်းကလေးက ကျွန်တော့်ညီမ” ဟုပြောသည်မှာ အားလုံးနားလည်ကြသော်လည်း သဒ္ဒါမှားနေသည်။ “နှမ ပေးယောက်ဖ”ဆိုသောစကားသာရှိပြီး “ညီမပေးယောက်ဖ”ဆိုသောစကားမရှိသည်ကိုကြည့်၌လည်း သိနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်း “သူက ကျွန်မ အစ်ကိုပါ” ဟုပြောလျှင် ယခုခေတ်တွင် အားလုံးနားလည် နိုင်သော်လည်း သဒ္ဒါအရ မမှန်ပါ။ “သူက ကျွန်မ ရဲ့ မောင်ကြီးပါ။ သူက ကျွန်မ ရဲ့ မောင်ငယ်ပါ” ဟုဆိုမှ မြန်မာစကားစစ်စစ်မည်ပါ၏။ မန္တလေးဈေးချိုသူတို့ကျိန်လေ့ ရှိသော “မောင် ကြီးနှမ ကျားကိုက်ရ ပါစေရဲ့ ရှင်၊ ဈေးအမှန်ပါ၊ ပို မပြောပါဘူး။” ဟူသောစကားက မြန်မာမင်း၏ နေ ပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသော မန္တလေးသူမန္တလေးသားများ၏ မြန်မာစကားအသုံးကို သိနိုင်ပါသည်။
ညီအစ်မဆိုသော စကားရှိသဖြင့် ညီမနှင့်အစ်မသည် မိန်းမချင်းအတွက် သုံးသောစကားဖြစ်သည်။ “သူက ကျွန်မ ရဲ့ ညီမပါ၊ သူက ကျွန်မ ရဲ့အစ်မပါ” ဆိုသော အသုံးအနှုန်းမှာမှန်သည်။ မြန်မာစစ်စစ်များနေရာ အထက်အညာဒေသမှ အညာသူအညာသားများ ရှေးဟောင်းမြန်မာစကားကိုသုံးနေသော ရခိုင်များ၏ အသုံးအနှုန်းတို့ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့် လျှင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပေါ်လာပါလိမ့် မည်။
အထက်အညာဒေသဘက်တွင် အခေါ်အဝေါ်ကိုကြည့် ၍ ဆွေမျိုးတော်စပ်ပုံကို သိနိုင်သည်။ ဥပမာ ဘကြီးနှင့် ဘဒွေး (ဘထွေး)တို့ သည် အဖေ၏ အစ်ကိုနှင့်ညီဖြစ်ကြောင်းကိုပြပြီး ဦးကြီး နှင့်ဦးလေးတို့ သည် မိခင်၏မောင်ကြီးနှင့်မောင်ငယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသည်။ မိကြီးသို့ မဟုတ်ဒွေးကြီးသည် အမေ၏ အစ်မ ဖြစ်ကြောင်း၊ မိဒွေး ( မိထွေး)သို့ မဟုတ် ဒွေးလေးသည် အမေ၏ညီမဖြစ်ကြောင်းကိုပြသည်။ “အမေကျော်၍ ဒွေးတော်လွမ်း” ဟူသော စကားပုံကို ကြည့် ပါ။ အရီး (ကြီး )သို့ မဟုတ် ကြီးတော် နှင့် အရီးလေးတို့ မှာ ဖခင်၏ အစ်မနှင့်နှမ ဖြစ်ကြောင်းပြသည်။
” ဆွေ” ဆွေ၇ ဆက် “မျိုး” ၇ ဆက်ဟူသည်မှာ မိမိအထက်ကလူများကို “ဆွေ” ဟုခေါ်၍ မ်ိမိ အောက်က လူ များကို “မျိုး” ဟုခေါ်သည်။
ဆွေ ၇ ဆက်မှာ ဘ၊ ဘိုး၊ ဘေး၊ ဘီ၊ ဘင်၊ ဘောင်၊ ဘော် ဟူ၍ ရှိပြီး မျိုး ၇ ဆက်မှာ သား၊ မြေး၊ မြစ်၊ တီ၊ တွတ်၊ ကျွတ်၊ ကျွတ်ဆက် ဟူ၍ ရှိသည်။
ကြာလျှင် မြန်မာစာနှင့် အသုံး ပျက်ပါတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် စေတနာဖြင့် ဤသတိပေး ဆောင်းပါးကို ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း။
Tags: ခင်မောင်စော (ဘာလင်), ရခိုင်
10 Responses to ခင်မောင်စော (ဘာလင်) – ဖစ်မှဖစ်ရလေ (၂)
Catwoman on January 16, 2016 at 8:19 am
I agree with some of them but I think you re just too picky. We always used the word nyi ma for sister. And if people translate the queen wrong, it s not the end of the works. I would rather meditate than be picky if I m lucky enough to live till age 70.
Maung Maung Kyi on January 17, 2016 at 1:40 am
Thanks for your very good article OMG 2.
Would appreciate if you could send your previous article OMG 1 ( bitte in pdf format, please ) as I had lost it, when my last computer crashed.
Catwoman on January 17, 2016 at 9:50 am
I mean end of the world. Not end of the works. Many things are important but we can’t be picky about everything
San Hla Gyi on January 17, 2016 at 5:54 pm
ဟိုတလောကတောင် အသိ တစ်ယောက် ပြလို့ ထူးဆန်းတဲ့ စာကြောင်း တစ်ခု တွေ့သေးတယ် အန်ကယ်။ ရေးထားတာက ကံစမ်းမဲဖွင့်ပွဲကို ရှင်ရှင်ဟုန်ဟုန် ကျင်းပပေးပါမည်လို့ ရေးထားတယ်။ ရှင်ရှင်ဟုန်ဟုန် ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာမှန်း မသိဘူး။ တရုတ်စကားကနေ တိုက်ရိုက် ယူသုံးတာလား ကိုယ်တိုင် ထွင်ထားတာလား မသိတော့ဘူး။ Human resources department ကို လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဌာနလို့ ဘာသာပြန်တာလည်း တွေ့ဖူးတယ်။
Khin Maung Saw on January 19, 2016 at 4:42 pm
မြန်မာစကားမှာ “အရှိန်အဟုန်”ဆိုတာရှိပြီး “ပွဲတော်ကိုအရှိန်အဟုန်မပျက်ဆက်လက်ကျင်းပမည်”ဆိုရင် သဒ္ဒါမှန်ပြီးလူတိုင်းနားလည်မည့်ဝါကျပါ။
အန်ကယ့်အထင်မှာတော့ ဝေါဟာရ အသစ်ထွင်ဆရာက “ရှိန်ရှိန်ဟုန်ဟုန်” ဆိုတဲ့ကြိယာဝိသသနသစ်ကို (“အသောက်အစား”နဲ့ “သောက်သောက်စားစား တို့ “အဆဲအဆို” နဲ့ “ဆဲဆဲဆိုဆို” ပုံမျိုးဖမ်းပြီး) ထွင်လိုက်ဟန်ရှိပါတယ်။ အဲဒီ “ရှိန်ရှိန်ဟုန်ဟုန်” ကိုလည်း သတ်ပုံမှန်အောင်မရေးတော့ “ရှင်ရှင်ဟုန်ဟုန်” ဖြစ်ပြီး တရုတ်စကားးသံထွက်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Catwoman on January 18, 2016 at 6:08 am
For me someone who is havingastroke or heart attack is the life and death. Someone who is introducing his sister as nyi ma is not. But I m glad there re people with plenty of time in the world to worry about those issues.
Loka Pala on January 19, 2016 at 5:03 pm
Someone who introduces his sister as ‘nyima’ would not beaproblem for most of us although it may not be (as KMS suggests in, let’s say, controversy) perfectly corret. But if someone introduces his sister as ‘mainma’ (woman, as sister is alsoamainma by gender) that would beaserious problem for all of us – those with human instinct – since speech reflects the speaker’s mind and vice versa. Unfortunately disfiguration or rather devolution of Burmese language (both writen and speeches) is eminent during last couple of decades and is nowadays close to that stigma which is obvious and should be concerned. Those like saya KMS who care to share their time, knowledge and most importantly sensible contribution, shedding some light on those in the dark unknowingly or otherwise, should be commendable. I for one humbly expect more of such an artical with ample food for thoughts.
Nyunt Shwe on January 20, 2016 at 4:36 am
မြန်မာစာ အသုံးအနှုန်း အမှားတွေကတော့ တင်းကြမ်းပါပဲဗျာ။ တခုတ်တရ ရေးဖော်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်ရေးပြီး အတော်စုံတဲ့အခါကျရင် စာအုပ်ထုတ်ပါ။
Catwoman on January 20, 2016 at 9:40 am
Hopefully people won’t be that dumb to introduce sister as wife. We can’t be picky in daily life. Overall who re we to judge others? It s all mind and matter. There s only organ and object. If we re mindful , there are no such thing as myself, my wife, my business. We can talk about this, that and the other and can argue all day long and nothing can come of it. Even lord Buddha doesn’t waste time talking about the beginning of the universe etc etc because there s no use arguing about those issues. If I have extra time I ll volunteer atafree clinic but I won’t pick on small things. It s not life and death matter to call your sister nyi ma.
Catwoman on January 20, 2016 at 6:07 pm
If patients come to me and their grammar is not correct, i m not going to complain about that. We see patients and type on the computer at the same time to document, so what we re typing might not be the most correct and there might be spelling error but that s not imp because we just need the info. And there is limitation of time.The patient s telling you many things and you re typing many things and asking questions and explaining things while trying to show empathy and compassion. I ll never put down anyone who can’t talk the best language. That s my point. I m sure some words and usages re being messed up but to tell people that calling sister nyi ma is wrong isabit much. I feel that there re more important things to do in the world.